China Heavy Disc Harrow ho an'ny orinasa mpamboly 1BQX sy mpamatsy | RY AGRI
Ny andiana 1BQX Disc Harrow andiany maivana dia mety amin'ny hodi-biby malemy sy malemy rehefa avy niasa tany sy nandamina ny tany alohan'ny famafazana tany nambolena. Ireo milina dia afaka manamboatra ny tany sy ny zezika hifangaro, ary hamafa ny fototr'ireo zava-maniry amin'ny tany maivana na antonony ary manomana ny fandriana masomboly hambolena.
Ny andian-jiro Disc Harrow andian-jiro maivana dia vita amin'ny fantsom-by mahay, Ny rafitr'izy ireo dia tsotra sy mitombina, matanjaka sy mateza, mora ampiasaina, mora tazomina ary mahomby amin'ny famolahana sy ny fidirana ao anaty tany ary mamela ny tany amin'ny malama, na ny tilth aza. Ireo rehetra ireo dia manome fahafaham-po ny fepetra fambolena amin'ny fambolena mafy.
Ny andiany 1BQX fampiatoana Light-duty Disc Harrow eo alohan'ireo andian-jiolahimboto ao aoriany dia mivondrona amin'ny kapila vita amin'ny scalloped, azo ampiasaina amin'ny 12HP ka hatramin'ny 70HP traktera karazana.
Ny sakany miasa
No. ny kapila
Fampiasana, fanitsiana ary fikojakojana
1. Fitsipika fampiasana rake:
(1) Ny fikosoham-bary sy ny fatotra rehetra dia malefaka.
(2) Rehefa miasa ny rake dia voarara ny mihemotra. Rehefa mihodina ilay rake dia tokony hatsangana.
2. Fanitsiana ny halalin'ny rakotra:
(1) Rehefa manamboatra ny zoro fihintsanan'ny vondrona rake dia tokony vahana aloha ny U-bolt amin'ny vondrona rake. Ny halalin'ny rakotra dia hihalalina amin'ny fitomboan'ny zoro mihodina. Amin'ny ankapobeny, ny zoro mihodina amin'ny vondrona rake aloha sy aoriana dia tokony ho eo amin'ny tsipika mitovy. Ny vondrona famolavolana aoriana dia 3 ° lehibe kokoa noho ny vondrona mpikaroka voalohany. Aorian'ny fanitsiana ny zoro sahaza azy dia tokony hohamafisina ny U-bolt.
(2) Amin'ny ankapobeny, ny lavaka eo ambanin'ny volo dia azo ampitomboina.
3. Fanitsiana marindrano sy mitsivalana amin'ny rake.
(1) Ny olana dia azo hamahana amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny halavan'ny fifandraisan'ny traktera sy ny tehina misintona.
4. Fanesorana ny tady ampahany:
Ny rohy ambony amin'ny fifandraisan'ny traktera dia tokony hohalavaina, na ny vondrona rake aloha sy aoriana dia tokony hafindra mankany amin'ny lalana mifanohitra amin'ny halavirana mitovy amin'ny fotoana mitovy, na tokony hahena ny zoro mihodina amin'ny vondrona karoka eo aloha.
5. Fanitsiana ny fahazoan-dàlana scraper:
Ny fahazoan-dàlana eo anelanelan'ny lelan'ny scraper sy ny velaran-tsoloky ny ravin-koditra dia tokony ho 1 ~ 8 mm. Rehefa miasa amin'ny tany misy votoatin'ny rano na tsimparifary lehibe dia tokony alaina araka izay tratra ny kely kokoa
Teo aloha: Harrow disk mavesatra ho an'ny fambolena 1BJ
Manaraka: Mpamboly 3Z Ho an'ny landihazo soja katsaka